Michael Brown oo Ferguson laga xusay - BBC Somali
Michael Brown oo Ferguson laga xusay
Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay magaalada Ferguson ee dalka Maraykanka waxayna aamusnaan ku xuseen sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay dilkii loo gaystay wiilkii yaraa ee Madawga ahaa ee aan hubaysnayn ee Michael Brown.
Afar daqiiqo iyo bar aamusnaan ah ayaa baroordiiq looga dhigay, waxaana lagu beegay wakhtigii ku aadanaa markii maydka wiilkaasi uu wadada yaalay.
Toogashada wiilkaasi 18 jirka ah ee uu gaystay Darren Wilson oo ah booliis cadaanka ah ayaa Maraykanka oo dhan ka dhalisay dibad baxyo.
Waxa ayna dhalisay dhaqdhaqaaqyo qaran oo lagu diidanyahay midab takoorka booliiska.
Dadka xuquuqda aadanaha u dooda iyo qaar ka mid ah dadka diimaha oo dalkaasi oo dhan ka kala yimid ayaa ka mid ah dadka isugu soo aruuray Ferguson oo ku taala duleedka St Louis, oo Missouri ka tirsan.
Wadaad lagu magacaabo Osagyefo Sekou, oo ka tirsan Ferguson Action Council, ayaa BBC u sheegay in dhacdadii sanadkii hore ay bulshada madawga ah u horseeday isbadal xoogaa ah oo dhanka wanaaga ah balse aysan bulshada oo dhan ahayn.